हट नायिका एवं मोडल एलिसा राई कस्ता पुरुष मनपराउछिन् ? • Janaboli
हट नायिका एवं मोडल एलिसा राई कस्ता पुरुष मनपराउछिन् ?
हेर्दा साधारण देखिने पुरुष नै मलाई सुन्दर लाग्छ । ज्यान पनि ठिक्कको होस्, न मोटो न पातलो । लुगा लगाउँदा पनि चट्ट मिलेको देखियोस् । आर्मी स्टाइलमा छोटो कपाल काटेको पुरुष एकदमै ह्यान्डसम लाग्छ । पुरुषले नाना थरीका हेयर कलर गरेको चाहिँ मन पर्दैन । धेरै झुसे पाराले दाह्रीजुँगा पालेको पनि मन पर्दैन । दाह्री भए पनि अनुहारलाई सुहाउने खालको होस् भन्ने लाग्छ ।
गोलो अनुहार, गहुँगोरो वर्ण भएको पुरुषलाई म सुन्दर पुरुष मान्दछु । चिम्से अथवा ठूला नभई आँखाको आकार ठिक्कको होस् । आँखीभौँ धेरै बाक्लो नहोस् र जोडिएको पनि नहोस् । आँखाको रङ हलुका नहोस् । खैरो, कालो जुन रङ भए पनि गाढा होस् । नाक न थेप्चो होस् न चुच्चो ठिक्कको नै राम्रो लाग्छ ।
पुरुषले धेरै फेसनेबल लुगा लगाएको पनि त्यति मन पर्दैन । साधारण सर्ट, प्यान्ट लगाएर हिँड्ने तर हेर्दा जेन्टल देखिने होस् । राम्रो र सफा लुगामा ठाँटिएर हिँड्ने पुरुषमा मेरा आँखा अडिन्छन् । कानमा सानो टप लगाएको पुरुष पनि खूब मन पर्छ । धेरै अग्लो वा होचोभन्दा सामान्य उचाइको पुरुष सुन्दर लाग्छ ।